Ndị mmadụ - SiChuan XiangYue Power Line Components Co., Ltd.
Ozi si n'aka CEO
Tụkwasị obi 、 arụpụta ihe na ihe ọhụrụ bụ akụkụ dị mkpa nke gburugburu ụwa azụmahịa taa. Ebumnuche ụlọ ọrụ anyị bụ ịkwado ihe ndị a.
Achọtara XY Tower Co., Ltd. na 2008 mgbe ọ bụ ụlọ ọrụ mmalite. N'okpuru nduzi nke njikwa na mbọ nke ndị ọrụ niile, XY Tower ugbu a mepụtara onye na-emepụta ụlọ elu ọkachamara na otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị ukwuu nke ụlọ ọrụ a na ọdịda anyanwụ China.
XY Tower na-enye "ụlọ ahịa nkwụsị" maka ịzụ ahịa azụmahịa nke akụrụngwa eletriki, imepụta ụlọ elu na imepụta ụlọ elu.
site na nkwado nke njikwa ọkachamara na ndị injinia ọkachamara, XY Tower bụ inye ngwaahịa na ọrụ asọmpi maka ndị ahịa anyị. XY Tower nwere ihe niile; teknụzụ, sistemụ njikwa, ndị mmadụ na ike ego iji bụrụ ndị na-eweta ọrụ na China na mba ofesi.
Anyị nwere otu ọkachamara ma nwee ntụkwasị obi. Anyị bụ nnọọ ahụmahụ maara otú izute chọrọ nke ndị ahịa. Na anyị nwere obi ike na-eme ka ihe ndị magburu onwe ngwọta na hụ na anyị na ngwọta na-arụ ọrụ n'ụzọ zuru ezu, rụọ ọrụ nke ọma ma na-agbanwe agbanwe mgbe niile.
Njikwa anyị nwere nkezi afọ 30 na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ a ma nwee obi ụtọ banyere ohere azụmaahịa dị na ahịa ahụ.
Obi dị m ụtọ ịhụ usoro nlekọta ntozu ntozu, ndị ọrụ ịnụ ọkụ n'obi enyi na ndị otu ọkachamara iji gboo mkpa azụmahịa ugbu a na n'ọdịnihu. Ọ bụ ugbu a ka ndị ahịa anyị dị oké ọnụ ahịa kpebie, lee ka XY Tower si nwee ihe ịga nke ọma n'ịhụ ma ọ bụ karịa ihe ha tụrụ anya ya ma jiri nkwụghachi ụgwọ na-akwụ anyị ụgwọ iji mee ka ha ka mma.
A na m atụzi anya na ndị ahịa ọhụrụ anyị na ndị ahịa anyị, ka anyị mepụta ọdịnihu ka mma!
Chunjian Shu (Onye isi oche)
Maazị Shu bụ onye injinia eletriki igwe eletriki nwere afọ 40 'ụlọ ọrụ eletriki. Ọ nwere afọ 20 na-arụ ọrụ ahụmịhe na ngalaba mmiri na ngalaba ike eletrik nke gọọmentị mpaghara Sichuan wee malite ma jikwaa ụlọ ọrụ na-aga nke ọma na ụlọ ọrụ eletriki na nkwukọrịta.
Maazị Shu nwere ezigbo ọrụ na ngalaba gọọmentị yana ijikwa mmepe azụmahịa. O gosiputala ndu ya ma nwee uche ohuru n'ime onwe ya.
Maazị Shu etinyewo aka n'ịzụlite ezigbo mkpali na nka
ọkachamara otu. Ọ bụ onye ndu azụmaahịa dị irè ma tinyekwa ọtụtụ echiche ọhụụ na iwulite ntọala eletriki.Maazị Shu bụ onye nwere nchekwube doro anya ma kwenyere n'ịrụsi ọrụ ike. Ọ na - ewepụta uru maka onye nwe ụlọ na ọha mmadụ.
Yong Lee (Onye isi njikwa)
Maazị lee, gụsịrị akwụkwọ na nhazi ihu igwe na Mahadum Hebei nke Science & Technology.
Maazị Lee malitere ọrụ ya na Bureau of Geological Prospecting na ndịda ọdịda anyanwụ China na 1980s. Mgbe ahụ, ọ rụrụ ọrụ maka ụlọ ọrụ gọọmentị nwe ụlọ nke nwere ndị ọrụ 700 ruo afọ 20.
Maazị Lee nwere ahụmịhe bara ụba nke iso ndị otu dị iche iche na-arụ ọrụ gụnyere ngalaba gọọmentị, ụlọ ọrụ gọọmentị na ụlọ ọrụ nkeonwe. Ọ nwere ndekọ ndekọ egosipụtara nke ọma ijikwa nnukwu ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Dị ka onye ndu, ikike ya ịhazi otu ndị otu ọchichọ nwere mmekọ dabara na ọhụụ ya mere ka ụlọ ọrụ ahụ nweta ọnọdụ kwesịrị ịja mma na mba ahụ.
Maazị Lee bụ ọkachamara na ụlọ ọrụ na-ekpo ọkụ ọkụ nwere aha ọma na ndịda ọdịda anyanwụ China. Ọ bụ nkà na-emeso ụlọ elu elu ọgwụgwọ pụrụ iche na nnukwu corrosion mpaghara.
Willard Yue Shị (Onye isi azụmaahịa ofesi)
Maazị Shu nwetara nzere masta ya na njikwa ya na ego mba ofesi na Mahadum Glasgow, Britain. Ọ nwere afọ iri na-aga n'ihu na-arụ ọrụ ahụmahụ na ịmalite Instlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Capitallọ Ọrụ. Ọ na-achịkwa ihe gbasara ego nke ụlọ ọrụ ahụ, Nchịkwa mmadụ na azụmaahịa. O nwere nnukwu ịnụ ọkụ n'obi na ọganihu ụlọ ọrụ na teknụzụ ọhụụ.
Ọ maara nke ọma na usoro njikwa azụmaahịa ọgbara ọhụrụ ma nwee ọgaranya aka na ahụmịhe na usoro ọzụzụ atụmatụ ọnụahịa, atụmatụ atụmatụ yana itinye ego na ntinye ego hi-tech. O nwere ikike puru iche duru ndi otu ma nyefee oru kariri ihe ndi ahia choro.
O butekwara ụzọ tupu ya ehiwe ụlọ ọrụ nke mba ofesi. Ọchịchị ya dị omimi na nghọta zuru ụwa ọnụ ga-eduga ụlọ ọrụ na-agbasawanye mbara igwe ya karịa ókèala ụlọ.
Chief engineer project, na afọ 20 nke ụlọ elu ígwè na-arụ ọrụ ahụmahụ, a maara nke ọma ọkachamara karịsịa n'ọhịa nke ụlọ elu igwe na-enyefe ígwè. Otu ndị injinia nwere mmadụ 6, nke ọ bụla nwere afọ 5-20 nke ahụmịhe ọrụ. Enginefọdụ injinia na-arụ ọrụ nke ọma na ụlọ ọrụ nnyefe ma ụfọdụ dị mma na ụlọ nkwukọrịta. Ndị injinia niile ga-anwa ịchọta azịza zuru oke maka ọrụ ọ bụla nwere nnukwu ahụmịhe ha.
Production manager, na 16 afọ nke ụlọ elu mmepụta ahụmahụ, onye na-ahụ maka mmepụta management nke ụlọ elu si ngwaọrụ na okokụre ngwaahịa. Enwere ndị mmadụ 115 na ndị ọrụ mmepụta na 30,000 tọn nke ihe nchara ga-emepụta kwa afọ.
Onye na-ahụ maka ihe ọkụkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, bụ onye tinyeworo aka na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ maka afọ 25, ọkachasị maka galvanizing ụdị nchara, na-eduga otu ndị mmadụ iri atọ, nwere ahụmịhe bara ụba iji kwado nkwa HDG.
Onye isi injinia nke ihe osise gbagoro, na afọ 11 nke nnukwu ọrụ ọrụ. Ndị otu ahụ bụ mmadụ 5, nke ọ bụla na-eji ụbọchị 3-5 arụcha ụlọ elu ihe osise 1.
Onye na-enyocha ihe onwunwe, enwere mmadụ ise na ndị otu nyocha ihe, onye ọ bụla nwere asambodo nke "asambodo asambodo maka ndị ọrụ nyocha ihe", Ha ga-ahụ na ọnụọgụ ngwaahịa a karịrị ma ọ bụ hara nha 99,6%, yana ụlọ ọrụ mmepụta ihe gafere. ọnụego bụ 100%.
Sales Rep, Shirley Song bụ ezigbo enyi, ndidi, na ọkachamara ahịa, onye na-arụ ọrụ na XY Towers maka ihe karịrị afọ 10 ma mara ụlọ elu nchara nke ọma.
Ahịa Rep, nwa agbọghọ nke ji onye ahịa kpọrọ ihe nke ukwuu ma na-anya isi nke ukwuu dị ka ahịa, nke nwere nnukwu mmasị n'ụlọ elu nchara, nwere olile anya ịnye ihe kachasị mma maka ndị ahịa ọ bụla.
Ọ bụ ọrụ maka ngwa ngwa na ụlọ na mba ọzọ maka afọ 12 na XY Tower. Onye maara nke ọma banyere nkesa na mbupu nke ihe nchekwa na ọdụ ụgbọ mmiri kwekọrọ na ụdị ngwaahịa anyị.